Ungayithola kanjani imifundaze yasekolishi | Ukwakheka kanye nezifundo
UMaite Nicuesa | 25/12/2021 23:48 | Kubuyekezwe ku- 25/12/2021 23:51 | Scholarship
Ungayithola kanjani imifundaze yasenyuvesi? Thola eyodwa Umfundaze wasenyuvesi kuwumgomo wezemfundo ukuthi, njenganoma yimuphi omunye, ohambisana nokubaluleka kokuhlela. Kubalulekile ukuthi umfundi achaze umgomo wakhe futhi akhe uhlelo lokusebenza ukuze afeze injongo yakhe. Ekuqeqesheni nasezifundweni sikunikeza amathiphu ayisisekelo ongawasebenzisa.
1 1. Ukubonisana izingcingo ezahlukene
2 2. Lungiselela imibhalo kusenesikhathi
3 3. Funda ukuze uthuthukise amamaki akho
4 4. Yenza ngokwezifiso inqubo yokusesha imifundaze
5 5. Sebenzisa incwajana ukubhala phansi noma yiluphi ulwazi olubalulekile
1. Ukubonisana izingcingo ezahlukene
Umfundaze ngamunye uhloselwe iphrofayili ethile yomfundi. Iphrofayili eshiwo kufanele ihlangabezane nezimfuneko ezithile ezichazwe kahle ocingweni. Ngakho, hambisa isicelo sakho kwizibonelelo ezahlukene ezibanjwa unyaka wonke. Ungaba kanjani nolwazi olusha lwencwadi ngayinye entsha? Bheka lolu lwazi ngeGazethi Yombuso Esemthethweni.
Ngakolunye uhlangothi, ungabheka futhi ukuthi inyuvesi ofunda kuyo inaso yini isigaba esiklanyelwe ukweluleka abafundi ngalesi sihloko. Ngewebhusayithi yoMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezandla ungafinyelela isigaba seScholarship and Helps.
Abafundi abaningi bafuna ukufeza inhloso yokuthola umfundaze wasekolishi. Ngakho-ke, ungakhuluma nabanye ofunda nabo noma ubuze abanye abamukeli bemifundaze obaziyo endaweni yangakini ukuthola izeluleko.
2. Lungiselela imibhalo kusenesikhathi
Kunocezu lolwazi olubaluleke kakhulu ocingweni olusha lomfundaze: usuku lokugcina lokuhambisa izicelo. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, ngisho noma ikhandidethi ihlangabezana nezidingo ezidingekayo zokucela usizo, izimo ezibalulekile zokucubungula inqubo azisekho.
Futhi kwesinye isikhathi kuyadingeka ukwethula inhlobonhlobo yemibhalo okumele i-odwe kusenesikhathi. Ngakho-ke, ungashiyi le nqubo yokulungiselela kuze kube umzuzu wokugcina.
3. Funda ukuze uthuthukise amamaki akho
Irekhodi lezemfundo lingeminye yemibhalo engabaluleke kakhulu lapho ufaka isicelo somfundaze. Kunjalo lapho umfundi kufanele abe nebanga elithile elimaphakathi. Iqiniso eliphinde libe khona ngemuva kokuphothula iDegree yaseNyuvesi uma umfundi eqala iziqu zobuDokotela.
Futhi unethuba lokufaka isicelo sezibonelelo eziklanyelwe ukusekela umsebenzi wabacwaningi kulesi sigaba. Ngakho-ke, inhloso yokuthola umfundaze wasenyuvesi ixhumene nezenzo ezahlukahlukene ezingenziwa esikhathini esifushane. Ukuzinikela kwansuku zonke ekufundeni kuyisihluthulelo sokuthuthukisa amaphuzu okuhlolwa.
4. Yenza ngokwezifiso inqubo yokusesha imifundaze
Usizo olufanele yilolo olufanelana nephrofayela yakho. Kunezingcingo ezehlukene ezethulwa minyaka yonke. Kodwa-ke, umfundi akahlangabezani nezidingo ezidingekayo ukuze afanelekele yonke imifundaze eshicilelwe. Enza ngendlela oyifisayo inqubo yokukhetha futhi unciphise indawo yosesho ngalezo zinsiza ezihambisana nezidingo zakho.
5. Sebenzisa incwajana ukubhala phansi noma yiluphi ulwazi olubalulekile
Kusukela lapho umfundi ecela umfundaze, kuze kushicilelwe isinqumo sabazongenela ukhetho, kuyadlula isikhathi. Kuhle ukuthi usebenzise incwajana ukuze ubhale noma yiluphi ulwazi oluhlobene nenjongo ofuna ukuyifinyelela. Isibonelo, isimemezelo socingo olusha, idokhumenti okufanele uyilungiselele, umsebenzi osalindile nanoma yiluphi olunye udaba.
Okokugcina, kubalulekile ukuthi ulandelele leyo mifundaze oyifakile isicelo. Futhi, futhi, ungalindeli kabi imiphumela yocingo olungase lube khona. Ungadikibali kusenesikhathi ngezinkolelo ezinomkhawulo. Isinyathelo sokuqala sokufinyelela umgomo onjalo wezemfundo ukuwuzama izikhathi eziningi njengoba kudingeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Scholarship » Ungayithola kanjani imifundaze yasekolishi
Ungazi kanjani ukuthi isifundo sivunyiwe?